Global Voices teny Malagasy » Mampitsahatra ny Tranokalan’ny Mpanivan’ny Fanjakana Rosiana Ireo Mpiady Anaty Akata Nomerika · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Jona 2017 12:52 GMT 1	 · Mpanoratra Isaac Webb Nandika Tantely
Sokajy: Rosia, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Teknolojia, Akon'ny RuNet
Sary avy tamin'i Luis Prado ho an'ny Noun Project. Natambatr'i Tetyana Lokot.
Raha tapaka ny 3 Jona tao Rosia ny fahafahana miditra tamin'ny fitaovana fandefasana hafatra Telegram, fanindroany izay tao anatin'ny herinandro latsaka , nanahy ireo olona sasany hoe ireo manampahefanam-panjakana no nibahana ilay sehatra. Nahazo faneriterena  tamin'ny Roskomnadzor, ilay mpanivan'ny fanjakana, ny Telegram, mba hanaraka ilay lalàna iray mangataka an'ireo tolotra amin'ny Aterineto mba hampita ny angon-drakitry ny mpampiasa azy ary hisoratra anarana ao amin'ny governemanta tato anatin'ny volana maromaro.
Fa sambany tamin'ity indray mitoraka ity, tsy ny Rozkomnadzor no meloka. Fa kosa, niharan'ny hetsiky fampielezankevitry ny mpiady anaty akata nataon'ny dymoff.space, sehatra izay voabahana any Rosia, ny Telegram. Noho ny tsy fanjariana  tao firaketan'ny Roskomnadzor ireo vohikala voasakana, afaka nanova ireo lamina ara-teknika ny dymoff.space ary nanova ireo adiresy IP an'ireo vohikala hafa ho toy ny azy.
Noho izany, raha nanampy ny adiresy IP an'ny dymoff.space tao amin'ny lisitrany ny mpamatsy tolotra Aterineto (ISPs), voabahany tsinahy ny Telegram sy ireo vohikala hafa maro any Rosia.
Nahafantatra tsara io fahabangàna io ny Roskomnadzor talohan'ilay fanafihana, ary nilaza tamin'ireo mpamatsy mba haka mivantana ny adiresy IP an'ireo vohikala avy amin'ny tahirin'ireo vohikala voabahana, fa tsy avy amin'ny an'ireo vohikala voabahana. Vao haingana anefa, namerina nanao fanamarinana an-tànana ireo adiresin'ireo vohikala voabahana ny ISPs, ka nahatonga ireo vohikala lehibe maro ho voabahana– ary na dia ny rindrambaikon'ny Roskomnadzor aza.
Mampahatsiahy ireo ezaka mafy maro nanoherana ilay mpanivan'ny fanjakana taorian'ny fanapahankeviny hibahana ny bilaogin'i Alexey Navalny ny taona 2014, ireo fanafihana ireo. Namintina  ireo ezaka tamin'izany fotoana izany i Andrey Tselikov ao amin'ny RuNet Echo:
Satria ny Roskomnadzor mangataka ny ISPs (mpanome tolotra aterineto) mba hanamarina isaky ny mihetsika raha toa ka misy manandrana mihodina ilay fandraràna, amin'ny fanovàna ny adiresy IP-ny, lasa afaka mampiditra kaody ireo vohikala voabahana, izay mamily ny sasany amin'ireo fangatahana IP ireo ho any amin'ny vohikala hafa. Ny farany, raha araka ilay teoria, haka io vohikala navily io ny ISPs hibahanana ilay vohikala faharoa koa. Noho izany, raha misy vohikala iray voabahana ka manana ny fari-pahalalàna rehetra sahaza mba hamiliana any amin'ny vohikalan'ny governemanta, ohatra hoe ny Kremlin.ru, lasa hibahana tanteraka ny Kremlin.ru ny ISPs, fibahanana izay mazava ho azy fa tsy hijanona ela.
Ny taona 2012, raha nametraka ilay firaketany ny Roskomnadzor, nandrakitra ireo anaran'ny sehatra sy adiresy IP-n'ny vohikala anaty lisitra mainty izy ary nanome an-tànana ho an'ireo ISPs io lisitra io , mba hahafahan'izy ireo mibahana izay vohikala ao anatin'ilay lisitra. Nanomboka ny taona 2015, nampiasa “Inspektera” iray ny Roskomnadzor, izay mibaoko tena manamarina ny fidirana amin'ireo vohikala anaty lisitra mainty, mba hanamarinany fa tena voabahana marina tokoa izy ireo, tamin'ny fandrahonana ireo mpamatsy hoe mety handoavan'izy ireo lamandy raha toa ireo vohikala ireo ho afaka miala amin'ilay fibahanana.
Ho valin-kafatra, mpamatsy maro no nanomboka nanao fanamarinana an-tànana ireo adiresy IP mba hialàna amin'ny sazy. Araka an'i Filipp Kulin , ny tale jeneralin'ny mpampiantrano diphost.ru, mahatonga ireo mpamatsy manampy tsy nahy ireo adiresy IP ao anatin'ireo lisitry ny voabahany io fanamarinana an-tànana io.
Karazana fanafihana nifanesy
Tamin'io fanafihana vao haingana indrindra io, nampidirin'ny dymoff.space ho ao anatin'ny fametrahany DNS ny adiresy IP an'ireo vohikalan'ny Channel One tantanan'ny fanjakana ao Rosia, ireo vohikala media sosialy Odnoklassniki sy VKontakte, NTV.ru, Booking.com, Facebook, Russian Railways, Mail.ru, ary vohikala hafa maro, na dia tsy tapaka tanteraka aza ny fidirana tamin'ny ankamaroan'ireo vohikala satria izy ireo mampiasa adiresy IP  maro.
Na izany aza, tsy afaka niditra tanteraka tamin'ny vohikala iray izay nampidirin'ny dymoff.space tao amin'ny lisitrany ireo mpampiasa : nag.ru, vohikala izay manolotra fandrasàna vaovao mikasika ireo ISPs Rosiana.
Sary: Pixabay sy Kremlin Press Service, navoakan'i Kevin Rothrock.
Namintina ny hetsika tao aminà lahatsoratrra lava dia lava tao amin'ny fantsony manokana Telegram i Leonid Volkov avy ao amin'ny Fikambanana Miady amin'ny Kolikoly an'i Alexei Navalny:
Ny zavatra efa noeritreretina hitranga ihany no mitranga ankehitriny : nitrandraka ny tsy fanjariana tamin'ny rafitry ny fibahanana ny tompon'ny iray amin'ireo loharano nobahanana, ary nanao izany mba ho voabahan'ireo mpamatsy, manaraka ny fanapahankevitry ny Roskomnadzor hibahana ny loharanony, koa ireo vohikala maro hafa, miainga avy tamin'ny “Channel One” ka hatrany amin'ny Telegram, avy tamin'ny nag.ru ka hatramin'ny “SKB Kontur” (ry zalahy a, aza kitikihitina Nag.Ru sy “SKB Kontur!”).
Efa imbetska ny olon ano niteny foana ny Roskomnadzor nandritra ny taona maro fa misy tataka ao, io olana ao amin'ny rafitry ry sareo io, fa tsy nahita izany ny Roskomnadzor…diso manampahaizana loatra ry zareo ao.
Tsy ny Dymoff.space ihany no vohikala voabahana namaly bontana tato ho ato. Ny Alakamisy 1 Jona, Dmitry Khomak, mpanorina ny Lurkmore , ilay “Wikipedia mpanadrohadro ,” dia nibitsika sarinà taratasy avy tamin'ny Roskomnadzor ho an'ireo ISPs, nangataka ny hanesorana ao anatin'ny lisitra mainty ireo adiresy IP an'ny VKontakte sy Yandex. Ireo adiresy IP-n'izy ireo moa, toa natsofok'ireo sehatra voabahana vao haingan'ny Roskomnadzor koa.
Tena adaladala mihitsy izany: voararan'io homamiadana I.P. io (tena marina, misy zavatra toy izany ao amin'ny Roskomnadzor), ireo mpamatsy ao Rosia tsy hibahana ireo adiresy IP an'ny Vkontakte sy Yandex.
Toy izany koa, ny tapaky ny volana May, nanampy mangingina ny adiresy IP an'ny Inspekteran'ny Roskomnadzor tao amin'ny pejy DNS-ny ny tompon'ny sehatra ncsmedia.ru. Ho valin-kafatra, nandefa izao taratasy manaraka izao tany amin'ireo mpamatsy Aterineto ny Roskomnadzor, mangataka ny hanesorana ny adiresy IP-n'ny Inspektera ao anatin'ny lisitra maintin'izy ireo.
Ny lahatsoratry ny hafatra nalefa tany amin'ireo mpamatsy tolotra Aterineto mangataka ny hanaisorana ny adiresy IP-n'ny Roskomnadzor ao anatin'ny lisitra maintin'izy ireo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/06/27/101481/
 herinandro latsaka: http://www.cnews.ru/news/top/2017-05-31_telegram_ispytyvaet_globalnyj_sboj
 Nahazo faneriterena: https://www.rferl.org/a/russia-telegram-messenger-vibrant-political-platform/28496108.html
 tsy fanjariana: https://www.znak.com/2017-06-04/dyra_v_sheme_blokirovok_roskomnadzora_postavila_pod_ugrozu_krupneyshie_sayty_runeta
 Namintina : https://globalvoices.org/2014/03/25/how-russians-are-outsmarting-internet-censorship/
 Filipp Kulin: http://www.cnews.ru/news/top/2017-06-05_kak_trollyat_roskomnadzorili_izza_chego_sluchayutsya
 Wikipedia mpanadrohadro: https://globalvoices.org/2012/11/25/united-russia-mps-object-to-online-satire/
 June 1, 2017: https://twitter.com/aalien/status/870377080441245696